BTS ၏ YHT မတော်တဆဖြစ်ရပ်မှန်ဖော်ပြချက် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီBTS Ankara YHT မတော်တဆဖြစ်ရပ်မှန်ဖော်ပြချက်
14 / 01 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
btsden Ankara yht မတော်တဆမှုကိစ္စတွင်ဖော်ပြချက်
ယူအေအီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS) ကမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမတော်တဆမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်မှုသည်မှန်ကန်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်မှုအတွက်အမှန်တကယ်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း BTS ကရေးသားတဲ့ကြေညာချက်ဟာ၊ ၁။ အန်ကာ - ကွန်ယာရထားနှင့်တူညီသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်အန်ကာ - မာဆန္ဒစ်တွင်ပျက်ကျခဲ့ရာ ၉ ဦး သေဆုံးပြီး ၉၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည် (၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁၃) သူ့ကိုမနေ့ကအန်ကာကာ ၃၀ အကြီးစားရာဇ ၀ တ်မှုခုံရုံးမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။
တရားရုံးကချမှတ်သောစွဲချက်တွင်၊ ၁၅ နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကြောင့်လူတစ် ဦး ထက်ပိုသောလူတစ် ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွင်တရားခံသုံး ဦး အနက်သုံး ဦး သည်တရားခံ ၁၀ ဦး ၏ကြားနာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
လက်ရှိဖြစ်ရပ်တွင်ရထားအဖွဲ့အစည်းအရာရှိနှင့်မတော်တဆမှုအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်စက်ယန္တရားသမားများနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာများကိုစစ်မှန်သောတရားမျှတမှုမရှိပဲစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။
ကြားနာခြင်းအပြီးတွင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ရထားအဖွဲ့အစည်းအရာရှိ Osman Yildirim ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး Sinan Yavuz နှင့် Traffic Controller Emin Ercan Erbey တို့ကိုလွှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၄ တွင်ကြားနာခြင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
ပထမ ဦး စွာသတိပြုသင့်သည်မှာဤမတော်တဆမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်ပြစနစ်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အလားတူမတော်တဆမှုမည်သည့်အချိန်တွင်မဖြစ်နိုင်သည်။ တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်းအထွေထွေ ဦး စီးဌာန (TCDD) ကမီးရထားဝန်ထမ်း၏ထွက်ခွာချိန်နှင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုမတော်တဆမှုအပြီးတွင်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမတော်တဆမှုတိုင်းအတွက်တကယ့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ AKP ကာလတွင် ၀ န်ထမ်းများ၏အမှားအယွင်းများ ကျော်လွန်၍ TCDD တွင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအမည်အောက်တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ကျင့်သုံးသောအလေ့အကျင့်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဗျူရိုကရက်များသည်သိပ္ပံနည်းကျခြေလှမ်းများလှမ်းနေခြင်း၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော ၀ န်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ရန်၊ ၀ န်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်ခြင်း၊
ဤအကြောင်းပြချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သမဂ္ဂနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာတွင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြင်ဆင်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည်။ "ဒါဟာနိုင်ငံရေးပြပွဲ၏မျက်နှာကိုထောက်။ မပြည့်စုံလိုင်းများဖွင့်လှစ်ရန်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်နိုင်ငံရေးဖိအားအကြီးတန်းဗျူရိုကရက်တိတ်ဆိတ်စွာနေနှင့်ဤ၏ထူးဆန်းသောအမိန့်ထုတ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏လက်အောက်ငယ်သားညွှန်ကြားထားရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၏မျက်နှာသာအတွက်သူတို့ကို၏ဖိအားပေးခံရခြင်းမှတားဆီး၏။ “ အဓိကတာ ၀ န်ယူမှုဘယ်မှာရှာရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။
ငါတို့အဆိုအရဒီမတော်တဆမှု၏အမှန်တကယ်တာဝန်အလွန်သိသာသည်။ ဒီကံမကောင်းတာကဒီမတော်တဆမှုအပြီးမှာစစ်မှန်တဲ့တာ ၀ န်ရှိသူတွေကိုတရားစီရင်ရေးကိုခေါ်ဆောင်သွားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။
လူသိရှင်ကြားသိသင့်သည်မှာအများပြည်သူသိစိတ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုသည်အချက်ပြစနစ်မပြီးဆုံးမီတရားစီရင်ရေးမတိုင်မီမျဉ်းကြောင်းဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မတိုင်မီအပြည့်အ ၀ သေချာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီမတော်တဆမှုရဲ့တကယ့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့ငါတို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာကိုလူထုအားလုံးသိသင့်တယ်။
အဆိုပါ BTS ထံမှ Çerkezköy ဘူတာရုံဖော်ပြချက်နှိပ်ပါ
BTS နှင့်ရထားသဘာဝဘေး Related ၏တူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးစာနယ်ဇင်းဖော်ပြချက် Make ဖို့ဖြစ်တယ်
Corlu ရထားမတော်တဆအစီရင်ခံစာထဲကနေ BTS: "Gone 15 န်ထမ်းတစ်ဝက်တစ်နှစ်တာ"
အဆိုပါ YHT TCDD Elvankent မတော်တဆထုတ်ပြန်ချက်
BTS အဖွဲ့ဝင်များ Afyonkarahisar လမ်းလျှောက်တူရကီ, Balikesir မှ လာ.
တူရကီဘူတာပိုင်ရှင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် BTS ကနေ Quit!
အဆိုပါမီးရထားမတော်တဆမှုကနေဖော်ပြချက် | Konya ရထားပျက်ကျမှု